Somaliland hadda ayuunbay baraarugtay. | Saxil News Network
Somaliland hadda ayuunbay baraarugtay.
Qodaalka beeruhu, waa dhaqdhaqaaqii ugu da’da waynaa uguna qaalisanaa ee Aadamigu ka qabto dunida korkeeda, sababtoo ah waxaa loo baahanaa in cunto lasoo saaro. Somaliland sanadahan dambe ayay caadi ugu baraarugtay in ciiddeeda hodanka ah ay cunto ku beerato.
Wasaaradda beeraha oo dhaqaale ka helaysa Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF, ayaa dalka kawadda mashaariic kaladuwan oo kor loogu qaadayo wax soosaarka beeraha. Mashaariicdu, waxa ay isugu jiraan daryeelka iyo joojinta carrada, qabashada biyaha, dhismaha xarumo cilmi baadhiseed iyo goobo lagu tababaro beeralayda.
Safar xog raadin ah oo qayb ka ahaa tababar uu Sanduuqa SDF u furay saxaafadda dalka si aqoontooda kor loogu qaado, ayaannu 9kii bishan January ugu baxnay aniga iyo koox suxufiyiin ahi deegaanka Abu-Riin oo 35km koonfur galbeed kaga beegan caasimadda Somaliland ee Hargaysa. Markii deegaanka aannu gaadhnay waxaannu mid-mid isu dul taagnay goobaha mashaariicda laga wado, waxaana warbixino faahfaahsan naga siiyay saraakiil ka socdtay wasaaradda beeraha iyo SDF oo deegaanka ku sugnaa.
Abu-Riin, waa deegaan ku habboon beeraha, buuro aan aad u dhaadheerayn ayaa saddex jiho kaga wareegsan, waana barta uu ka soo bilaabmo dooxa wayn ee dhex mara magaalada Hargaysa. Xarun taariikh ah oo tababarka iyo cilmi baadhista beeraha lagu sameeyo, ayaa kutaalla. Dadka ku dhaqan deegaanka Abu-Riin oo beeralay iyo xoolo dhaqato u badan ma beeri karaan dalaggii looga baahnaa dhulkan carro-sanka ah, waayo waxaa hortaagan caqabado ay ka mid yihiin biyo yari iyo nabaad-guur ka dhashay daadadka xooggan ee xilli roobaadka ka soo rogmada buuraha ku xeeran oo xaalufiyay carrada lakabkeeda sare ee dalagga lagu abuuro, dhirtuna ay nafaqada ka hesho.
‘’ Si xal loogu helo caqabadaha jira loona dhiirri geliyo wax soosaarka beeraha Sanduuqa Horumarinta Somaliland, Waxa uu maal gelinayaa mashaariic isugujirta ; qoditaanka 38,000 godad kala hooseeya oo lagu wareejinayo buuraha si loo dhimo xoogga biyaha kasoo rogmanaya; godadkaas 12,000, ayaa la dhammaystiray halka inta kalena gacanta lagu hayo. Daadegga hoose, waxaa laga qodayaa moosas hakinaya biyaha soo dhaafa godadka buurta intaanay beeraha gaadhin, waxaa kale oo la qodayaa 28 balli oo la dhammaystiray 16 kamida iyo 12 berkedood oo dhammaantood lagu kaydinayo biyaha .680 beerood, ayaannu u qodnay godadka loo yaqaan naxarada ’’ sarkaal Ka socda wasaaradda beeraha Somaliland oo deegaanka ku sugnaa ayaa sidaa noogu xog waramay.
Sarkaalkan oo lagu magcaabo Maxamed Daahir Warsame, ayaa intaas kudaray ‘’ In gebi ahaanba aannu joojinno biyaha soo mara dooxa Hargaysa, ayaannu isku dayaynaa oo dadka looga faa,iideeyo’’.
Xarunta cilmi baadhista beeraha iyo tababarka beeralayda ee Abu-Riin Training Center oo la aasaasay waagii Ingiriisku xukumayay Somaliland, ayaa 25 sanno kadib lagu sameeyay dibu- dhis iyo qalabayn. 18 kamida shaqaalaha wasaaradda beeraha ee gobolada dalka, oo tababar lagu siinayo sida wax loogu beero dhulka qallalan, ayaannu xarunta ku booqanay xilli macalin xiisad u sharaxayo.
‘’ sidii ay tababarro ugu fidin lahaayeen beeralayda dalkoodhan, ayaa loo diyaarinayaa dhalinyaradan’’ maamulaha xarunta, ayaa sidaa noo sheegay.
Dhinaca kale bulshada deegaanka, ayaa mushruucan ku sifeeyay mid waxbadan ka bedelaya noloshooda, waxaana ay rajaynayaan in loo dhammaystiro.
Inkasta oo masuuliyiintu aanay noo xaqiijin qiimaha ku baxaya, hadana mashruucan waxaa lagu waddaa in uu tusaale u noqdo koboca wax soosaarka wadanka.